အဘယ်မှာရှိအစားအသောက်နှင့်အဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ - အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့သတင်းအချက်အလက်များ | USAHello
တချို့ကအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူတို့လိုအပ်သည့်အစားအသောက်ဆိုင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်သေချာမသိကြ, သူတို့ဇာတိတိုင်းပြည်ထဲကနေအစဉ်အလာအစားအစာများကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါ. အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုနှင့် USA တွင်စျေးဝယ်သွားဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. အစားအစာကိုဝယ်သည်အတွက်စျေးဆိုင်များအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. ရိုးရာအစားအစာများကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာမည်. အဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အကြောင်းကို Read နှင့်မည်သို့အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ဖို့.
စကားလုံး အစားအသောက်ဆိုင် သငျသညျကိုဝယ်အစားအစာကိုဆိုလိုသည်. သငျသညျအကွောငျးကိုဖြုန်းဖို့ကြိုးစားသင့် 20% တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လအစားအသောက်ဆိုင်ပေါ်တွင်သင်၏စုစုပေါင်းမိသားစုဝင်ငွေဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း. ရှိပါကဤသည်ကိုဆိုလိုသည် $1,000 ဝင်ငွေအတွက်တစ်ဦးချင်းစီလ, သငျသညျသုံးဖြုန်းသင့်တယ် $200 အစားအသောက်ဆိုင်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း. သငျသညျအရဆိုပါက $500 လတိုင်း, သငျသညျကိုသာသုံးဖြုန်းဖို့တတ်နိုင် $100 အစားအစာအပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း, သင်သည်လည်းအိုးအိမ်နှင့် utilities များအတွက်ပေးဆောင်လျှင်.
သင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်အနည်းငယ်သာကုန်ကျကြောင်းအရာအခြို့ကို USA တွင်စျေးကြီးဖြစ်နိုင်သည်. ဥပမာ, မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒုက္ခသည်များလတ်ဆတ်တဲ့အုန်းသီးနှင့်သရက်သီးကိုစားလိုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အဲဒီပစ္စည်းစျေးကြီးတယ်.
အသားများနှင့်အသီးကို USA တွင်မကြာခဏစျေးကြီးတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျအခြို့သောအသစ်သောအစားအစာများအဖြစ်သင့်ရဲ့ရိုးရာအစားအစာများကိုစားရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
တစ်ဦး store မှာတစ်ဦးကို item မှာစျေးနှုန်းပင်ဖြစ်ပါသည် အကယ်., သင်သည်ထိုစျေးနှုန်းပေးချေရန်ရှိသည်. သို့သော်, ဒီအသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းရောင်းစျေးကွက်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များတွင်လျော့နည်းမှန်.
US မှာအများစုကမြို့ကြီးများလယ်သမားများ’ စျေးကွက်, အထူးသဖြင့်နွေရာသီအတွက်. တစ်လယ်သမားမှာ’ စျေးကွက်, သငျသညျလယ်သမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်စိုက်ပျိုးရောင်းချလတ်ဆတ်တဲ့အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှာတှေ့နိုငျ. နွေရာသီမှာ, you may spend less money than you would atagrocery store for the same items, ဒါပေမယ့်မအမြဲ - အချို့သောကြီးမားသောကုန်စုံစတိုးဆိုင်အော်ဂဲနစ်အသီးအနှံ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုကြီးထွားနေသောလယ်သမားများထက်လျော့နည်းဘို့ရောင်းချနိုင်ကြသည်, ဥပမာ.
တချို့ကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတိုင်းရင်းသားစတိုးဆိုင်ရှိ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံကနေအစားအသောက်ဆိုင်ရောင်းချတဲ့စတိုးဆိုင်အဓိပ္ပာယ်. ဥပမာ, တစ်ခုရှိစေခြင်းငှါ, “အိန္ဒိယစျေးကွက်” သို့မဟုတ်တစ် “တရုတ်စျေးကွက်” သောသူတို့နိုင်ငံတွေထဲကနေအစားအစာများရောင်းချ. သငျသညျမြားစှာမြို့ကြီးများအတွက်တိုင်းရင်းသားကုန်စုံစတိုးဆိုင်ရှာတှေ့နိုငျ FindHello.
USA တွင်စာဆိုင်များအစားအသောက်ရဖို့စျေးအကြီးဆုံးရာအရပ်ဖြစ်လေ့. အစာရှောင်ခြင်းအစားအစာစားသောက်ဆိုင်ပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်သင်အလွန်အကျွံကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာကိုမစားဘဲနေသကဲ့သို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်.
သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်မွို့၌ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုရှာဖွေတိုင်းရင်းသားအစားအစာနှင့်ခက်ခဲအခြားအထူးအစားအစာများရောင်းချဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. ဥပမာတစျခုဖွစျပါသညျ eFood သိုလှောင်ရုံ.
သင်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်အထူးအစားအစာများကိုရှာတှေ့နိုငျ. မဝယ် "လို့စကားများရိုက်ထည့်ပါ [သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အစားအစာ] အွန်လိုင်း။”
USA တွင်, သငျသညျသငျ့အိမျအဘို့အဝတ်နှင့်အရာများအတွက်စျေးဝယ်ဖို့ဘယ်မှာ၏ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်. သင်အမြဲသူတို့ရောင်းချမှုအပေါ်အခါအမှုအရာကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုးစားသင့်!
တစ်ဦးကကားဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ခြံရောင်းရန်ရှိသည်အသုံးတ်အထည်များနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွေ့ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးစျေးပေါများမှာ. ကားဂိုဒေါင်အရောင်းနှင့်ခြံအရောင်းကိုသင် USA တွင်သေဘေးနှင့်နိုင်ပါတယ်အနည်းငယ်သောအရပ်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. သင်တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်ခြံရောင်းချခြင်းမှာမှန်လျှင်ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်, သင်ကို item ပေါ်တွင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအဘို့အမေးရန်ကြိုးစားနိုင်.
Superstores နီးပါးအရာအားလုံးကိုရောင်းချကြောင်း USA တွင်စတိုးဆိုင်များမှာ. ဤရွေ့ကား Walmart တူသောစတိုးဆိုင်များပါဝင်သည်, ပစ်မှတ်, နှင့် Kmart. ဤရွေ့ကားစတိုးဆိုင်များယေဘုယျအားဖြင့်အမည်အားအမှတ်တံဆိပ်ဌာနစတိုးဆိုင်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း.
ဒေသခံစတိုးဆိုင်စာရေးအသစ်ရဲ့မြို့မှာဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်. ကိုယ်ငွေသည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဒေသအလိုက်စျေးဝယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သင်ပင်အခြားဒုက္ခသည်ပိုင်စတိုးဆိုင်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ.
သင်သည်သင်၏အမျိုးအဘို့ပစ္စည်းများလိုအပ်သို့မဟုတ်သင်၏အိမ်ပြုပြင်လိုလျှင်, သင်တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်. ဤအစတိုးဆိုင်များမှာအလုပ်လုပ်သူကလူနေအိမ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေပါလိမ့်မယ်.
အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦးကအများကြီးအွန်လိုင်းဒါမှမဟုတ်မေးလ်ထဲမှာလာကတ်တလောက်ထဲကနေမိမိတို့အဝတ်ကိုမဝယ်. USA တွင်, သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တစ် catalog ကနေသင်တို့ကိုမဝယ်အဝတ်ပြန်လာနိုင်ပါတယ်, သငျသညျစတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူပစ္စည်းများပြန်လာနိုင်ပါတယ်လိုပဲ.
USA တွင်စတိုးဆိုင်ရှိသူတို့နှင့်အတူမှားယွင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုသည်သို့မဟုတ်သူတို့ပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေလျှင်ပင်လျှင်လူတွေကုန်ပစ္စည်းများပြန်လာပါစေ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲဒါကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးနောက်သင်သည်တစ်ခုခုပြန်လာရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်. သငျသညျစျေးဝယ်အခါတိုင်း, သင်၏ပြေစာကိုစောင့်ရှောက်. ဤသူသည်သင်တို့ပစ္စည်းဝယ်ခြင်းနှင့်သင်ကဝယ်သောအခါအထောက်အထားဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကို item ပြန်လာချင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်လက်ခံရရှိလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုပြန်သွားဖို့ခက်ခဲသည်, သင်ကပျက်စီးကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိတ်တွေ့ရှိခဲ့လျှင်မူကားသင်တို့၌အစဉ်အစားအစာပြန်လာသင့်တယ် “မှရောင်းချသည်” နေ့စှဲ.